सपथ लिएपछि के भने प्रधानन्यायाधीशले ? - Everest Dainik - News from Nepal
सपथ लिएपछि के भने प्रधानन्यायाधीशले ?
काठमाडौं, साउन २ । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आज आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । त्यसअघि उनलाई आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
राजधानीको रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालतको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।
याे पनि पढ्नुस सर्वोच्चलाई प्रतिशोधमा प्रयोग गर्दै गाेपाल पराजुली
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिकालाई स्मार्ट बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् । उनले असाहय र विपन्न वर्गको पहुँचसम्म न्यायालयलाई पुर्‍याउने भन्दै पराजुलीले बार र बेञ्चबीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
२०१० साल वैशाख १६ गते तनहुँमा जन्मेका पराजुली २७ औं प्रधान्यायाधीश बन्न सफल भएका हुन् । पराजुली आगामी वैशाख १५ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्ने्छन् । तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अवकाशपछि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस चलेन ओलीको जोड, प्रधान न्यायाधिशमा पराजुली सिफारिस